နေပြည်တော်က ဦးခေါင်းသေနတ်ကျည်ဒဏ်ရာနဲ့ အသက်ပေးသွားရတဲ့ ညီမငယ်လေးအတွက် ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့် – Cele Posts
နေပြည်တော်က ဦးခေါင်းသေနတ်ကျည်ဒဏ်ရာနဲ့ အသက်ပေးသွားရတဲ့ ညီမငယ်လေးအတွက် ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်
ဖလမ်းမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး သက်မွန်မြင့် ကတော့ အကယ်ဒမီဆုတွေ များစွာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကျော် မင်းသမီး တစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်မြင့် ကတော့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်ကတည်းက သူမရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်နားထားပြီး လက်ရှိမှာလည်း ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် အလုပ်တွေကို ရပ်နားထားပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေ လျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်က သူမကိုယ်တိုင်လည်း မဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီးထားရာကနေ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာတော့ နေပြည်တော် သပြေကုန်းအဝိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်း သေနတ်ကျည်ဆန် ထိမှန်သွားခဲ့တဲ့ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမိန်းကလေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး သက်မွန်မြင့်ကလည်း “အသက်ပေးခဲ့ရပြီ! 😢😢😢 ညီမရေး ​နောင်ဘဝများကျ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးနဲ့ဝေးရာ ဒီလိုနိုင်ငံထက် သာလွန်အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာ မြင့်မြတ်မှုတွေနဲ့ နေရပါစေနော်🙏🏻🙏🏻🙏🏻” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်မွန်မြင့် ကတော့ ဦးခေါင်းသေနတ်ကျည်ဒဏ်ရာနဲ့ အသက်ပေး ကျဆုံးသွားတဲ့ နေပြည်တော်က ညီမငယ်လေး အတွက် ပြည်သူတွေနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက္ပါတယ်နော်။
နပွေညျတျောက ဦးခေါငျးသနေတျကညျြဒဏျရာနဲ့ အသကျပေးသှားရတဲ့ ညီမငယျလေးအတှကျ ဝမျးနညျးစှာနဲ့ ဆုတောငျးပေးခဲ့တဲ့ သကျမှနျမွငျ့
ဖလမျးမွို့မှာမှေးဖှားခဲ့တဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသူလေး သကျမှနျမွငျ့ ကတော့ အကယျဒမီဆုတှေ မြားစှာကို ရရှိပိုငျဆိုငျထားတဲ့ နိုငျငံကြျော မငျးသမီး တဈလကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျမွငျ့ ကတော့ (၂၀၂၀) ခုနှဈကတညျးက သူမရဲ့ကနျြးမာရေး အခွအေနတှေကွေောငျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ရပျနားထားပွီး လကျရှိမှာလညျး ပွညျတှငျးနိုငျငံရေး မတညျငွိမျမှုတှကွေောငျ့ အလုပျတှကေို ရပျနားထားပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူတူ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒထုတျဖျောနေ လကျြရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျမွငျ့က သူမကိုယျတိုငျလညျး မဲပေးရှေးခယျြထားတဲ့ အစိုးရအဖှဲ့ကို ဖမျးဆီးထားရာကနေ အမွနျဆုံးလှတျပေးဖို့ တောငျးဆိုနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။
မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၁၉) ရကျနမှေ့ာတော့ နပွေညျတျော သပွကေုနျးအဝိုငျးမှာ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒထုတျဖျောရငျး သနေတျကညျြဆနျ ထိမှနျသှားခဲ့တဲ့ အသကျ (၁၉) နှဈအရှယျ မိနျးကလေး မမွသှဲ့သှဲ့ခိုငျက ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ထိုမိနျးကလေးနဲ့ ပကျသတျပွီး သကျမှနျမွငျ့ကလညျး “အသကျပေးခဲ့ရပွီ! 😢😢😢 ညီမရေး ​နောငျဘဝမြားကြ ဒီလို အဖွဈဆိုးနဲ့ဝေးရာ ဒီလိုနိုငျငံထကျ သာလှနျအေးခမျြးတဲ့နရောမှာ မွငျ့မွတျမှုတှနေဲ့ နရေပါစနေျော🙏🏻🙏🏻🙏🏻” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ဝမျးနညျးကွောငျးပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သကျမှနျမွငျ့ ကတော့ ဦးခေါငျးသနေတျကညျြဒဏျရာနဲ့ အသကျပေး ကဆြုံးသှားတဲ့ နပွေညျတျောက ညီမငယျလေး အတှကျ ပွညျသူတှနေဲ့ ထပျတူ ဝမျးနညျးကွကှေဲနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုက်ပါတယျနျော။
တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်campaign တွေနဲ့ ခင်များတို့ကိုနားရွက် တံထွေးဆွတ်စိန်ခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ နားလည်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ချစ်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့ ခွဲနေရတာကြောင့် လွမ်းဆွတ်သတိရနေကြောင်းကို အမှတ်တရစကားလေးတွေနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ကိုပေါက်